Politika momba ny tsiambaratelo - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Tom Howard
Ny adiresin'ny tranokalanay dia: https://www.cannabisindustrylawyer.com.
Inona avy ireo angona manokana nokarohintsika ary nahoana isika no manangona izany
Rehefa mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokala ireo mpitsidika dia manangona ireo angona naseho tamin'ny endrika fanehoan-kevitra, ary koa ny adiresy IP an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa tranonkalan'ny filaharana mba hanampy amin'ny fitiliana spam.
Raha mandefa sary ao amin'ny tranonkala ianao, dia tokony hialanao ny mampakatra sary miaraka amin'ny angon-drakitra (GPS EXIF)). Ny mpitsidika ao amin'ny tranonkala dia afaka mandefa sy mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny sary ao amin'ny tranonkala.
Raha mamela fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokalanay ianao dia afaka misafidy ny hamonjy ny anaranao, ny adiresy mailaka sy ny tranonkala amin'ny cookies. Ireo dia noho ny fanao mahazatra anao ka tsy mila mameno ny tsipiriany intsony ianao rehefa mamela fanamarihana hafa. Ireo cookies dia haharitra mandritry ny herintaona.
Raha manana kaonty ianao ary midira ao amin'ity tranokala ity, dia mametraka cookie tsy maharitra izahay mba hahafantarana raha manaiky cookies ny browser-nao. Ity takelaka ity dia tsy misy angona manokana ary voaroaka rehefa manidy ny browser ianao.
Ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity dia mety ahitana ny votoatin'ny tranonkala (ohatra ny horonan-tsary, sary, lahatsoratra, sns.). Ny votoatin'ny tranokala hafa avy amin'ny tranonkala hafa dia mitovitovy amin'ny fomba mitovy amin'ilay nitsidika ilay tranonkala hafa.
Raha mamela fanehoan-kevitra ianao dia hajaina mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanehoan-kevitra sy ny metadata. Izany no ahafahantsika mamantatra sy mankato ny fanehoan-kevitra manaraka avy hatrany fa tsy mitazona azy ireo amin'ny filaharam-potoana maoderina.
Raha manana kaonty eto amin'ity tranonkala ity ianao, na nametraka fanehoan-kevitra, dia azonao atao ny mangataka ny handraisana ny antontan-taratasinao manokana momba ny tenanao manokana, anisan'izany ireo angona nomenao anay. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny hamafa ireo angona manokana hitanay momba anao. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny angona angatahantsika hitazomana ny tanjon'ny rafitra, lalàna, na fiarovana.
Ny fanehoan-kevitry ny mpitsidika dia azo jerena amin'ny alàlan'ny serivisy fanaraha-maso spam iray.
Ny fampahalalana momba ny fifandraisana
Ny fomba hiarovantsika ny angona
Inona avy ireo fepetra fanitsakitsahana ataontsika?
Izay antoko fahatelo azontsika angon-drakitra avy amin'ny
Inona no fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra sy / na famolavolana ataonay amin'ny data?
Fepetra ankapobeny momba ny fananganana orinasa